लसुन प्राय सबैको भान्सामा पाइने एक प्रकारको सब्जी तथा मसला हो । लसुन खानाले हुने फाइदाका बारेमा हामी मध्ये धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । तथापि हामी लसुन सब्जी तथा मसलाका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। आज हामी तपाईंहरुलाई लसुन खानाले हुने फाइदाहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै छौँ । लसुन काँचो तथा यसलाई मसलाको रूपमा हामी मध्ये धेरैले प्रयोग गर्दै आएका छौँ । तर यही लसुनलाई पोलेर खाने गरेमा विशेष गरी पुरुषका लागि यो अत्यन्तै फाइदाजनक साबित हुने गरेको अनुसन्धानले साबित गरेको छ।
आयुर्वेदमा लसुनका बारेमा अनेकौँ फाइदा उल्लेख गरिएको छ। हामी मध्ये धेरैले लसुनलाई फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। कसैले यसलाई काँचो प्रयोग गर्ने गरेका छौँ भने अरूले यसलाई सब्जी तथा अचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर लसुनलाई पनि पोलेर खान हुन्छ र १ भन्ने विषयमा धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ।
लसुनमा सल्फर नामक तत्त्वको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। यसमा एलिसिन नामक तत्त्वको पनि मात्र उपलब्ध हुन्छ । अनि यिनै गुणका कारण लसुनले कीटाणुनाशक तत्वलाई नष्ट पारिदिन्छ । यसमा उपलब्ध फंगल सँग लड्ने शक्ति तथा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताका कारण कैयौँ रोगका विरुद्ध लसुनले रामवाणको काम गर्छ । अनि लसुनमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने, यसमा लुकेको फाइट केमिकल पुरुष स्वास्थ्यका लागि अति फाइदा जनक हुन्छ । उसो त आयुर्वेद चिकित्सकहरू प्रायजसो पुरुषहरूलाई राती भुटेको लसुनको ४/५ केस्रा खान सल्लाह दिन्छन् ।
लसुनको फाइदाका बारेमा थप जानकारी
काँचो लसुन सेवन गर्नु स्वास्थ्यका हिसावले निकै लाभदायिक रहेको प्रायःसबैलाई ज्ञात नै छ। डाइटिसियनहरूले पनि लसुनका अनेकौं गुणहरूका कारण खानामा दैनिक समावेश गर्न सल्लाह दिने गर्दछन्। तर, के तपाईंले कहिल्यै तारेको लसुन खानु भएको छ ? काँचो लसुन जतिकै तारेको लसुन स्वास्थ्यका निकै लाभदायक हुन्छा।
यसको दैनिकरुपमा सेवन गर्दा धेरै रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ । पेटको स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर यसले तौल घटाउन, कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्न, मधुमेहको जोखिम कम गर्न, यौ न स्वास्थ तथा यौ न चाहनालाई पनि कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
१. से क्स हर्मोन बनाउँछ
लसुनमा एलिसिन नामक तत्त्व उपलब्ध हुन्छ, जसले पुरुषको से क्स हर्मोनलाई बलियो र ठिक बनाउँछ । यसको प्रयोगले पुरुषमा यौ न दुर्बलता ठिक हुन्छ । अनि लसुनमा उपलब्ध सेलेनियम तथा अत्यधिक मात्रामा उपलब्ध भिटामिनले वीर्यको मात्रा बढाउनुका साथै गुणमा वृद्धि हुन्छ ।
लसुन प्रयोग गर्नाले शरीरमा तापमान तथा गर्मी उपलब्ध हुन्छ र चिसोबाट बचाउँछ । साथै यसमा क्यान्सरसँग जुध्न सक्ने शक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ। लसुनलाई विशेष गरी प्रोस्टेट र ब्रेष्ट क्यान्सरबाट बचाउन सक्ने अचुक ओखतीको रूपमा लिइन्छ।
यदि तपाईँको पेटमा समस्या छ वा चाँडै इन्फेक्सनको सिकार हुनुपरेको छ भने, भुटेको लसुन खानुहोस्। यसको सेवन गर्नाले छाती पोल्ने समस्या, बान्ता तथा पेटमा हुने खराबी लगायतका समस्याहरू चाँडै हराएर जान्छ ।